Desktop – Category – Windows – Vessoft
Desktop Software ee design waxa uu caan ku Windows menu. Sidoo kale software ka taageertaa tiro badan oo ah qalab dheeraad ah in la xoojiyo menu.
English, Français, Español, Deutsch... WinBubble 2.0.3.7
Desktop Ayna System Software in ay tayadoodii iyo waxqabadka ka qabi karto ka mid ah nidaamka. Software ka kooban yahay tiro balaadhan oo ah qalab si astaysto nidaamka iyo beddelo goobaha ammaanka ah.
Desktop software The in uu soo bandhigo xaaladaha cimilada adduunka oo dhan. software The awood u tahay in la raaco tilmaamayaasha kala duwan cimilada iyo muujiyaan isbedelada ay dhaceen in map-ka.
Desktop software The si uu u xaliyo daaqadaha xushay on top of daaqadaha kale. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u daawato ay muujinayso TV, filimada iyo warbaahinta video on top of daaqadaha bilaabay.
English, Español, Deutsch, Italiano... Rainmeter 3.3.2.2609 iyo 4.0.0.2627 beta
Desktop Tool in uu soo bandhigo waxqabadka nidaamka iyo in la qorsheeyo desktop-ka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto goobaha kala duwan computer.
العربية, English, Українська, Français... Desktop Sidebar 1.05.116 beta
Desktop The set ee widgets waxtar leh iyo sirdoonka for desktop-ka. Waxaa ka mid ah alaabta wax jira taariikh, jadwaliye, Basaasku ee waxqabadka nidaamka iyo in ka badan.
العربية, English, Français, Español... Fences 2.13
Desktop Software in la abaabulo astaanta desktop-ka iyaga oo matalaya ee qaybaha kala duwan. Software ayaa awood u astaysto in muuqaalka kore ee block la astaanta u ah baahida user ah.
Graphics iyo design